ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ရိုသေခြင်း
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇူလိုင်. 07 2020 | < 1
အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းမိန်းကလေးများချိုလိမ့်မှ socialized နေကြသည်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုအများအပြားကြောင့်ထဲသို့ကျတဲ့ထောင်ချောက်ရှိပါတယ်, နေရာပေး, passive, စသည်တို့ကိုကောင်းစွာယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့. ကျနော်တို့ကြီးပြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုရသည့်အခါ, ကျွန်တော်တို့ကိုအများတို့ကယ့်ကိုအရိုအသေဖို့တုန့်ပြန်တွင်အဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုမသိကြဘူး.
ကျွန်တော်တို့အေးခဲနေတာကဲ့သို့အနည်းငယ်င်. ထိတ်လန့်. စိတ်ပျက်စရာ. ယခုအဘယ်အရာကို? ကောင်းစွာ, သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအရိုအသေအတွက်၏မည်သည့်ပုံစံနှင့်အတူတက်ကိုမထားမည်သူအမျိုးသမီးတစ်ဦးရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်. တစ်ဦးကအဖြစ်အပျက်နှင့်သူတို့အာမခံ. သေချာသလောက်ကတော့ကောင်းတစ်စိတ်ကူး!
ထိုအခါမူကားကျွန်တော်တို့ကို၏ကျန်ရှိသေး၏ – ရကိုယာယီကအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်သို့မဟုတ်စိတ်ဆိုးဖြစ်စေတော်မူသော, ဒါပေမယ့်ခါးသောဆေးနှင့်တူ – ကျွန်တော်မျိုပေါ်ရွှေ့. ဒါဟာကောင်းတဲ့အယူအဆမဟုတ်ပါ.
သင်သည်သင်၏တသက်တာမှာတွေ့ဆုံစေခြင်းငှါမည်မျှမိတ်ဖက်နေပါစေ, အမြဲအနည်းဆုံးတစ်ဦးလိုအပ်ချက်ရှိသင့်သည် – သင်တို့ကိုအဆုံးတိုင်အောင်တစ်နေ့တစ်ဦးထံမှလေးစားမှုနဲ့ကုသလျက်ရှိကြောင်း.
1. သင်သည်ရင်းနှီးသောများမှာ. သူသည်သင်၏ Like နှိပ်မနှစ်သက်ရာကိုလေးစားသင့်.
2. အချင်းချင်းစကားပြောနေကြသည်. သူကဒေါသအဖေကဲ့သို့သင်တို့မှစကားမပြောသင့်ပါသို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးကဒီကောင်တွေင်ဒီလိုပဲ.
3. သင်သည်အငြင်းခုံနေကြတယ်. ပင်စစ်တိုက်ခြင်းကိုအပူအတွက်, သင် disrespected မဖြစ်သင့်. ထိုသို့အပူပေါ်ရောက်လာပြီဆိုရင် – တစ်စုံတစ်ဦးကသွားကျင်လည်ရမည်.
4. သူသည်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုခန့်ဖြစ်ပါသည်. သူရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူသင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေ / မိသားစုကုသမပါဘူးဆိုရင်, ထို့နောက်သူသည်သင်တို့ကိုမလေးစားဘူး. သူတို့သည်သင့်ရဲ့တိုးချဲ့များမှာ.
5. သင်ကအဆုံးသတ်ထားပါသည်. ဆက်ဆံရေးကျော်ဖြစ်ပြီးထိခိုက်နာကျင်ခံစားချက်တွေကိုရှိပါတယ်ရင်တောင် – သူသည်သင်နှင့်အတူလူတန်းစားကအဆုံးသတ်ဒါမှမဟုတ်အဆုံးလက်ခံရန်မျှဝေခဲ့သောအရာကိုလုံလောက်တဲ့ရိုသေလေးစားမှုရှိသင့်.